निरन्तर ४२औं दिनसम्म खाना, खाजा सहयोग - Tanahun Awaj
Home समाचार	निरन्तर ४२औं दिनसम्म खाना, खाजा सहयोग
7th May 2020 7th May 2020 85 views
दमौली/तनहुँ उद्योग बाणिज्य संघ दमौली बजार इकाईको आव्हानमा शुरु भएको खाना ख्वाउने कार्यक्रम ४२ औं दिन चालु रह्यो । तरकारी लाईन, मासु व्यवसायी, खाद्यान्न व्यवसायी, टोल विकास संस्थाको व्यवस्थापनमा वडा नंं ३ कार्यालय समेतको स्वीकृति र अनुगमनमा शुरु भएको थियो ।
लायन्स क्लब अफ दमौलीको व्यवस्थापनमा तनहूँ उद्योग बाणिज्य संघ दमौली बजार इकाईले चैत्र २९ गतेबाट वडा नं. २ मा र पछि बैशाख १६ गतेबाट वडा नंं. ४ पनि शुरु गरिएको छ ।
विपन्न मजदुर, पैदल यात्री, वेशाहारालाई खाना खाजाको व्यवस्था गरिएको तनहुँ लायन्स क्लब अफ दमौलीका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ ‘राकु’ले बताए । सहयोग कार्यक्रम चैत्र १३ गतेबाट शुरु गरिएको थियो ।
बुधबारसम्म ३२ जना मनकारी दाताहरुको नगद, खाद्यान्न, दाउरा सहयोगमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । तीन हजार सात सयजनालाई खाना ख्वाईएको छ । आयोजकले डेढ लाख सहयोग आएको, खर्च दुई लाख ४० हजार भएको जनाएको छ ।
तउवा संघ दमौली बजार इकाईको अवधारणमा यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको थियो ।
भावरमा रहेको झोलुङ्गे पुल
अभ्यास गर्दै र गराउँदै रेडक्रस कर्मिहरु